Warshadda Gawaarida Gawaarida Gawaarida | Shiinaha Soo-saare Goomaanka Gaasta daboolan, Alaab-qeybiyeyaal
Waxyaabahan la soo bandhigay waa wax yar oo ka mid ah qaybo kale oo badan oo aan bixinno. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kala duwanaanta alaabtayada oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa aan halkan lagu soo bandhigin degelkeenna, fadlan naga soo wac + 86-0319-5250815, ama codsi ku soo gudbi foomka xiriirkeena. Tirada qaybaha soo-saareyaasha asalka ah waxaa loogu talagalay ujeeddooyin tixraac oo keliya. Qayb kasta oo la muujiyo waxay ku habboon tahay dalabka magaca ee lagu xusay magaceeda. Shuruudaha Bixinta: L / C, D / A, D / P, Paypal, Western Union, TT Min.Order Quantity: 100 Piece / ...
Badeecadaha badankood waxay u yimaadaan sidii xirmooyin dhameystiran sidoo kale, fadlan weydii wax ku saabsan xulashooyinka xirmooyinkayada caadada ah.
Waxyaabahan la soo bandhigay waa wax yar oo ka mid ah qaybo kale oo badan oo aan bixinno. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kala duwanaanta alaabtayada oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa aan halkan lagu soo bandhigin degelkeenna, fadlan naga soo wac + 86-0319-5250815, ama codsi ku soo gudbi foomka xiriirkeena.
Macluumaadka Badeecadda Goomaha daboolka waalka waa dabool bir ah oo ku yaal xagga sare ee mashiinka. Fiiq ama goomayaal caag ah ayaa ku dhejinaya daboolka waalka mashiinka. Daboolka waalka iyo goomaantu waxay xirayaan mashiinka dushiisa waxayna ka hortagayaan saliida soo daadata. Daboolida waa la saari karaa, taas oo u oggolaaneysa marin u helidda qalabka. Heerkulka sare ee mashiinka dartiis, gasket daboolaya waalka ayaa u nugul inuu noqdo mid jajaban oo jaban Xayawaankeena tayada sare leh waxay ka samaysan yihiin waxyaabo aan duugoobi doonin, kana hortagaya saliida injirta ...
Badeecadaha badankood waxay u yimaadaan sidii xirmooyin dhameystiran sidoo kale, fadlan weydii wax ku saabsan xulashooyinka xirmooyinkayada caadada ah. Waxyaabahan la soo bandhigay waa wax yar oo ka mid ah qaybo kale oo badan oo aan bixinno. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kala duwanaanta alaabtayada oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa aan halkan lagu soo bandhigin degelkeenna, fadlan naga soo wac + 86-0319-5250815., Ama ku soo gudbi codsi foomka xiriirkayaga. Tirada qaybaha soo-saareyaasha asalka ah waxaa loogu talagalay ujeeddooyin tixraac oo keliya. Qayb kasta oo la muujiyo waxay ku habboon tahay dalabka calaamadaha lagu sheegay ...
Saliida Saliida, Xakameynta Gacan ku Qaadista, Qaybaha dayactirka, Qalabka Gawaarida, Qeybinta Qeybinta, Khatimidii Silicone Rubber,